Megangelyo-doonku wuxuu xaq u leeyahay adeegyada aasaasiga ah - Asylum in Finland
Adeegyada aad leedahay adigoo megangelyo-doon ah waxey ku saleysan yihiin sharci. Adeegyada aasaasiga ah ee aan laga maarmin waxaa qaabilsan xarunta qaabilaadda ee aad deggan tahay mudada ka baaraandegista codsigaada megangelyada.
Finland, xarumaha qaabilaaddu waxey ku yaalaan dalka oo dhan, xittaa deegaanada aysan dad badan deganeyn. Go’aanka meel dejinta waxaa gaaristiisa lagu saleynayaa xarunta qaabilaad ee boos ka bannaan yahay. Xaaladaha xarumuhu inta badan waa kuwa sida qeyb oo kale ah waana dhexdhexaad.
U diyaargarow in aad qol la qeybsato megangelyo-doonyo kale. Waxaad sidoo kale degi kartaa guri gaar ah, sida kan qaraabadaada ama saaxibadaada. Laakiin dowladdu ma siineyso qofka ku dejiyay magdhaw ee waa in aad adigu iska xallisaa kharashka laga yaabo in uu kugu baxo, tusaale ahaan waxaad ku bixineyso lacagta qaabilaadda ee aad hesho.
Carruurta aan qaangaarka aheyn islamarkaasna uusan waalidkooda la socon ee yimaada Finland waxaa la dejiyaa xarumo loogu talagalay carruurta iyo dhalinyarada. Carruurta megangelyo-doonka ah xittaa waxey Finland ku dhigtaan iskuul. Tani waxey quseysaa wiilasha iyo gabdhaha.
Ujeedada adeegyada xarumaha qaabilaaddu waa in la daboolo baahida aasaasiga ah. Yoolka la hiigsanayo waa in la kordhiyo lana hagaajiyo wanaagsanaantaada iyo in la horumariyo awooddaada waxqabad ayadoo lagula shaqeynayo. Marka aad deggan tahay xarunta qaabilaadda waa in aad u hoggaansantaa xeerarka xarunta iyo tilmaamaha ammaanka.
Haddii aadan heysan hantida aad naftaada ku biilato, waxaa lagu siinayaa lacagta qaabilaadda. Ujeedada lacagta qaabilaaddu waa in la dammaanad qaado kaalmada nololsha ee aan laga maarmin. Xarumaha qaabilaadda qaarkooda waxaa lagaa siinayaa maalin kasta cunto, qaarkoodna adigaa cuntada ku karsan kara.
Waa in aad ka qeybqaadataa waxqabadka shaqada iyo waxbarashada ee ay qabanqaabiso xarunta qaabilaadda. Haddii aad diido waxaa la dhimi karaa lacagtaada qaabilaadda.
Shaqaale xirfad u leh arrimaha bulshada iyo caafimaadka ayaa ka shaqeeya xarumaha qaabilaadda. Xaalado kala dududwan oo aad u aragto in ay dhibaato leeyihiin marka aad gasho waxaad si kalsooni leh ugu ciirsan kartaa shaqaalaha xarunta qaabilaadda. Megangelyo-doon ahaan waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka ee degdegga ah. Haddii shaqaalaha xirfadleyda ah aadan isku luqad aheyn waxaa ku caawinaya turjubaan.
codsiga megangelyda sharci dhaqaalaha nolosha shaqo waxbarasho